Jul 1 John & Simba Present The Food Album
A few weeks back in our interview with SImba Tagz we reminisce fondly about the seminal classic The Food Album. For any Zimbabwean who came of age around the turn of the millenium this musical masterpiece was the soundtrack to many fond memories and nights out at the school dance.
Jun 30 Jah Prayzah - Dangerous (Official Music Video)
Jah Prayzah has has Zimbabwe eating out of the palm of his hand and the trend continues with the release of the video for Dangerous, a video in which he cast his son Mukudzeyi Jnr in a starring role.
Jun 24 King98 Ft Nasty C & Laylizzy - Wacko (Official Music Video)
Zimbabwean rapper King98 releases his second video from the album Francesca, titled Wacko, featuring Nasty C and Laylizzy.
Jun 24 Terry Afrika Ft Trevor Dongo - Tamba Paida (Official Music Video)
erry Afrika teams up with fellow Zimbabwean singer Trevor Dongo for the new song and video Tamba Paida
Jun 24 Killer T - Baba Vako Imboko (Official Music Video)
Zimdancehall “Chairman” Killer T has a new music video out, it’s for the provocatively titled song Baba Vako Imboko.
Zimdancehall trailblazer Enzo Ishall decided to take his horse down the old town road on the new music video for the song Bhiza
Tytan has been teasing his new single Pamha to the lovers, and the Zimbabwean singer has finally released the video for it (and thankfully no bananas in sight).
Up & coming Zimbabwean singer T’Challo promises an Afro Pop/Dancehall/R&B fusion, his first release under his new moniker is Shuga